Man United vs Everton – Ibrahimovic, Herrera Iyo Shaw Oo Soo Laabtay & Jose Oo Guul U Baahan. - Wargane News
Home Sports Man United vs Everton – Ibrahimovic, Herrera Iyo Shaw Oo Soo Laabtay...
Manchester United ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa caawa Everton iyadoo dagaal ugu jirta iney ku dhawaato afarta sare sidoo kalana xusuusata in Goodison Park ay hal dhibic kusoo heshay markii ay booqatay kulankii hore, Jose ayaana u baahan guul si uu cadaadiska saaran waxyar isaga dajiyo.
Zlatan ayaa ganaax kasoo laabanaya kaas oo sadex kulan daawanayay kulamada kooxdiisa ee tartamada England, sidoo kalana Ander Herrera ayaa isna soo laabtay.
Shaxdii uu Jose ku wajahay West Brom wax badan ayaa iska badali doona madama sadex ciyaariyahan oo muhiim ah ay dib ugu soo laabteen.
Red Devils waxey fadhisaa booska 5-aad iyadoo sadex dhibcood u jirta Everton oo booska 7-aad ku jirtaa iyo Arsenal oo ay ka sareyso 2-dhibcood kuna jirta kaalinta 6-aad, sidoo kalana waxey 5-dhibcood u jirtaa Manchester City oo ku jirta kaalinta 4-aad ee horyaalka.
Kulanka: Manchester United vs Everton
Zlatan Ibrahimovic iyo Ander Herrera ayaa dib ugu soo laabtay Red Devils kadib ganaax ay kaga maqnaayeen kooxda kulamadii lasoo dhaafay sidoo kalana Paul Pogba ayaa kusoo laaban kara ciyaartaan.
Somaliland: Hargeisa Municipality Deploys Solar paneled traffic lights in six major City Intersection
Maxay Soomaalidu u jeceshahay madaxnimada siyaasadeed ?